दुई महिला र दुई पुरुष प’क्राउ ! कामनै यस्तो गर्दा रहेछन,,,,
दुई महिला र दुई पुरुष प’क्राउ ! कामनै यस्तो गर्दा रहेछन
१२ फागुन, काठमाडौं । प्रहरीले तीन जनालाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका वडा नं ४ का ४० वर्षीय वीरेन्द्र हमाल, सोही ठाउँकी ३८ वर्षीया दीपा बुढा र जाजरकोट जिल्लाको शिवालय गाउँपालिका– २ की २३ वर्षीया खिमा घर्ती क्षत्री छन्। वीरेन्द्र हमाल र दीपा बुढा श्रीमान-श्रीमती हुन् भने खिमा दीपाकी साथी भएकी प्रहरीले जनाएको छ।
नेपालगञ्जबाट भारतीय बजार रुपैडिहातर्फ जाँदै गरेका उनीहरूमध्ये खिमाले बोकेको लेडिज ब्याक खान तलासी गर्ने क्रममा तीन केजी चरेस बरामद भएको बाँके जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मधुसुदन न्यौपानेले जानकारी दिए।
लेडिज ब्यागभित्र पत्रिकाले बेरेको अवस्थामा आठ वटा पोकामा चरेस फेला परेपछि दिउँसो २ बजेतिर तत्काल प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको न्यौपानेले बताए। पक्राउ परेकाहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यता, प्रहरीले ५ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा गाउँपालिका-४ बस्‍ने १९ वर्षीय अब्दुल अन्सारी रहेका छन् ।
प्रहरीले उनको साथबाट पाँच ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका उनलाई झापा जिल्ला अदालतबाट ६ दिनको म्‍याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
२०७८ फाल्गुन १३, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 142 Views